1 Korintofo 11 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
1 Korintofo 11:1-34
11 Munsuasua me sɛnea me nso misuasua Kristo no.+ 2 Afei mekamfo mo, efisɛ mokae me ade nyinaa mu, na mukura nea mo nsa kae+ no mu sɛnea mede gyaa mo no ara. 3 Nanso mepɛ sɛ muhu sɛ ɔbarima biara ti ne Kristo;+ ɔbea nso ti ne ɔbarima;+ Kristo nso ti ne Onyankopɔn.+ 4 Ɔbarima biara a ɔbɔ mpae anaa ɔhyɛ nkɔm na biribi kata ne ti no hyɛ ne ti aniwu;+ 5 na ɔbea biara a ɔbɔ mpae anaa ɔhyɛ nkɔm+ na ɔnkata ne ti no hyɛ ne ti aniwu,+ na ɔte sɛ ɔbea a wɔabɔ no tikwaw+ pɛpɛɛpɛ. 6 Na sɛ ɔbea ankata ne ti a, ma onyi ne ti nhwi nso; na sɛ ɛyɛ aniwu sɛ ɔbea beyi ne ti nhwi anaa ɔbɛbɔ tikwaw+ a, ɛnde ma ɔnkata ne ti.+ 7 Na ɛnsɛ sɛ ɔbarima kata ne ti, efisɛ ɔyɛ Onyankopɔn suban+ ne n’anuonyam;+ na ɔbea de, ɔyɛ ɔbarima anuonyam.+ 8 Na ɔbarima mfi ɔbea mu, ɔbea mmom na ofi ɔbarima mu;+ 9 na bio nso ɛnyɛ ɔbea nti na wɔbɔɔ ɔbarima, na mmom ɔbarima nti na wɔbɔɔ ɔbea.+ 10 Ɛno nti na ɛsɛ sɛ ɔbea nya tumi ho sɛnkyerɛnne wɔ ne ti so,+ abɔfo+ no nti. 11 Nea ɛka ho bio no, Awurade mu no, ɔbarima ntumi nkwati ɔbea, na ɔbea nso ntumi nkwati ɔbarima.+ 12 Na sɛnea ɔbea fi ɔbarima mu+ no, saa ara na ɔbarima nso nam ɔbea so na ɛbae;+ nanso nneɛma nyinaa fi Onyankopɔn mu.+ 13 Mo ankasa mummu atɛn: So ɛfata sɛ ɔbea bɔ Onyankopɔn mpae bere a ɔnkataa ne ti? 14 So awosu ankasa nkyerɛ mo sɛ ɔbarima gyaw ne ti nhwi kusuu a, ɛnyɛ nidi mma no; 15 na ɔbea de, sɛ ne ti nhwi dɔɔso a, ɛhyɛ no anuonyam?+ Efisɛ wɔde ne nhwi no ama no sɛ ne ti nkataso.+ 16 Nanso sɛ obi po+ amanne yi gye foforo tom+ a, yɛn de yenni foforo biara, Onyankopɔn asafo horow no nso saa ara. 17 Nanso, bere a merema mo ahyɛde yi no, ɛnyɛ nkamfo na mede rema mo, efisɛ sɛ muhyiam a, ɛnyɛ adepa na moyɛ, na mmom adebɔne.+ 18 Nea edi kan koraa no, mate sɛ muhyiam sɛ asafo a, mpaapaemu wɔ mo mu;+ na migye di ɔkwan bi so. 19 Na etwa sɛ fekuw+ ahorow nso ba mo mu, na ama wɔn a wɔfata no ada adi mo mu.+ 20 Enti sɛ muhyiam faako a, muntumi nni Awurade anwummeduan no,+ 21 efisɛ sɛ edu sɛ moredi a, obiara di n’ankasa anwummeduan ansa, ma enti ɔkɔm de obi na ɔfoforo nso abow. 22 Munni afie a mudidi na monom wom anaa?+ Anaasɛ mubu Onyankopɔn asafo animtiaa, na mohyɛ wɔn a wonni hwee+ no aniwu? Dɛn na menka nkyerɛ mo? Menkamfo mo anaa? Eyi mu de, merenkamfo mo. 23 Nea minya fii Awurade hɔ no ara na me nso mede maa mo, ɛne sɛ anadwo+ a wɔrebeyi Awurade Yesu ama no, ɔfaa paanoo, 24 na ɔdaa ase wiei no, obubuu mu+ kae sɛ: “Eyi gyina hɔ ma me nipadua+ a wɔde bɛma mo. Monkɔ so nyɛ eyi mfa nkae+ me.” 25 Saa ara na ɔyɛɛ kuruwa no+ bere a owiee anwummeduan no, na ɔkae sɛ: “Kuruwa yi gyina hɔ ma apam foforo+ a ɛnam me mogya+ so no. Bere biara a mobɛnom kuruwa yi ano no, monkɔ so mfa nkae+ me.” 26 Na bere biara+ a mubedi paanoo yi anom kuruwa yi ano no, na morepae mu aka Awurade wu+ no akosi sɛ ɔbɛba.+ 27 Ne saa nti obiara a odi paanoo no anaa ɔnom Awurade kuruwa no ano ɔkwan a ɛnsɛ so no bedi Awurade nipadua ne ne mogya+ ho fɔ.+ 28 Nea edi kan no, ma onipa nhwehwɛ ne mu mfa nsɔ ne ho nhwɛ+ ansa na wadi paanoo no anom kuruwa no ano. 29 Na nea odi na ɔnom a onnim nea nipadua no kyerɛ no, odi nom de atemmu+ ba n’ankasa so. 30 Ɛno nti na mo mu bebree ayɛ mmerɛw na wɔyareyare, na ebinom nso adeda+ wɔ owu mu no. 31 Na sɛ yetumi hu nipa ko a yɛyɛ a, ɛnde wɔremmu yɛn atɛn.+ 32 Nanso sɛ wobu yɛn atɛn+ a, Yehowa teɛ yɛn so+ sɛnea ɛbɛyɛ a wɔremmu yɛn fɔ+ nka wiase no ho.+ 33 Ne saa nti me nuanom, sɛ muhyiam sɛ morebedi+ a, montwɛn mo ho mo ho. 34 Sɛ ɔkɔm de obi a, ma onnidi wɔ fie,+ na moammehyiam ammenya atemmu.+ Na nsɛm a aka no de, sɛ meba hɔ a na mɛtoto no yiye.
1 Korintofo 11